भदौदेखि फिल्म हल खोल्ने तयारी – Padhnekura
फिल्म हल खोल्ने निर्देशिका तयार पारेर चलचित्र विकास बोर्डमा बुझाइसकेको चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान बताउँछन् । ‘हल खोल्ने विषयमै हामी छलफल गरिरहेका छौं । बजार बिस्तारै खोलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार पनि मोडालिटी तयार गरेर छलफल गर्न तयार छ । विकास बोर्डमा गाइडलाइन एउटा बनाएर हामीले पेपर प्रिजेन्ट गरिसकेका छौं । भदौको अन्तिमसम्म हल खुल्छजस्तो छ ।’
सेयरका सवालमा भने पहिलो हप्ता ५० प्रतिशत सेयर बाँडफाँड गरिनेछ । भदौदेखि हल खोल्ने छाँटकाँट देखेसँगै हलवालालाई फिल्मको अभाव हुने उनी बताउँछन् । ‘हलमा देखाउन त प्रमुख त कन्टेन चाहियो । कन्टेन्ट नै छैन,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘यसपालि नाफामा नगए पनि घाटामा नजान हल खोल्ने तयारीमा लागेका हौं । व्यवसायको स्थिति खराब छ । हल खुल्यो है भन्ने जानकारी दिन पनि हामी हल खोल्छौं ।’
निर्माता, निर्देशक तथा वितरण कम्पनी स्टेसन फाइभका सीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठ हलसँग दर्शक जोड्न नयाँ फिल्मको आवश्यकता पर्ने बताउँछन् । ‘दर्शकलाई हलसम्म जोड्नु नै महत्वपूर्ण भएको बेलामा त कन्टेन त नयाँ चाहियो नै । अहिले त ट्रायल फेजमा छौं,’ उनले भने, ‘पुरानै फिल्म रिलिज गरेर एक हप्तासम्म रमाइलो हुन्छ । तर, त्यसले दर्शक आउँछन्जस्तो लाग्दैन । हल खुल्यो है भन्ने सन्देशचाहिँ जान्छ ।’
क्यूएफएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशन अडिगाले हल खोलिसकेपछि टिकटदेखि हलभित्र अनलाइन सिस्टमबाट नै खानेकुरा अर्डर गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘सावधानी अपनाएर हल खोल्न सकिन्छ भन्नेमा छौं । फिल्म पनि हुनुपर्योा । करोडौंको घाटा भएको छ । ‍ सावधानी अपनाएर नै हल खोल्छौं ।’
वितरक प्रचण्डमान भने हल चलाइसकेपछि हल सञ्चालकमा पर्ने भारबारे पनि बिकास बोर्डले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘निर्देशिका अनुसार हल चलाउँदाखेरी हल सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन ? आर्थिक हिसाबले कस्तो हुन्छ ? त्यो सबै प्याकेजमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘खोल भन्ने, खोलिसकेपछि २५ प्रतिशत अकुपेन्सीमा खोल भन्दा त हलको भाडा २५ प्रतिशत लिइँदैन । कर्मचारीले पनि पूरा तलब लिन्छ । कर, बिजुली खर्च हलको अकुपेन्सी घट्छ भने आर्थिक चपेटमा हलवाला पर्छन् । हल चलाइसकेपछि हलवालामा पर्ने आर्थिक भारको विषयमा बिकास बोर्डले सोचिदिनु पर्छ ।’
हल खोल्नुमात्र समस्याको समाधान नरहेको उनको तर्क छ । ‘सबै व्यापार नै हो । नाफा नभए पनि घाटामा त जानु भएन हल । त्यही हिसाबले नै हल खोल्ने हो । अब खोलेरमात्र चाहिँ समस्या समाधान होलाजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने।
‘प्रेमगीत ३’ गत चैत २८ मा प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो । तर, लकडाउनले गर्दा फिल्मको प्रदर्शन स्थगन भयो । हल खोल्ने तयारीमा हल सञ्चालक लागे पनि आफू अहिले नै फिल्म प्रदर्शन गर्ने मुडमा नरहेको फिल्मका निर्माता सन्तोष सेन बताउँछन् । उनले भने, ‘मेरो फिल्मको बजेट ठूलो छ । अहिले हल खोले पनि दर्शक झ्याप्प आउँछ/आउँदैनन् ठेगान छैन । त्यसैले म यो वर्षको अन्ततिर प्रदर्शन गर्ने सोच बनाइरहेको छु ।’
‘चपली हाइट ३’का निर्माता अर्जुन कुमार हल खोलिहाल्नु पर्ने अवस्था देख्दैनन् । गत चैत २८ मै प्रदर्शनको तयारीमा रहेको उनको फिल्म पनि कोभिड-१९ ले गर्दा स्थगन भयो । ‘नेपाली फिल्मले मात्र हल चल्छ भन्ने पनि छैन । अहिले हल खोलेर दर्शक आउँछन् भन्ने विश्वास पनि छैन । त्यसकारण मैले कहिले फिल्म लगाउने भनेर खास सोच बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘दर्शक नआउनु भनेको त हाम्रो फिल्म त्यतिकै मर्छ । पुरानोमात्र हुन्छ हाम्रो फिल्म ।’
‘लक्का जवान’का निर्माता किरण केसी फिल्मलाई दसैं कि त तिहारमा प्रदर्शन गर्ने सोच बनाइरहेको बताउँछन् । ‘भदौबाट हल खोल्ने कुरा सुनें । उनीहरु पूरानो फिल्म चलाउने तयारीमा रहेछन् । म अहिले नै फिल्म चलाउने सोचमा छैन । दसैं/तिहारमा प्रदर्शन गर्ने योजना छ ।’